Taliyaha Ciidanka Xoogga oo ka badbaaday Qarax lagula eegtay Muqdisho – news
Taliyaha Ciidanka Xoogga oo ka badbaaday Qarax lagula eegtay Muqdisho
Ilaalada Taliyaha Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa toogtay Naftii halige isku dayay in uu isku dhex qarxiyo Kolonyada ilaalada xili ay maraysay wadada Tarabuunka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Taliyaha Ciidamada Xoogga Soomaaliya Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage ayaa maanta si dirqi ah uga badbaaday Qarax Gaari oo lagula eegtay Kolonyo galbinaysay wadada Tarabuunka, ee degmada Hodon.
"Gaariga Surf ah oo uu waday qof ismidaamiye ah ayaa isku dayay in uu dhexgalo Kolanyada Ilaalada Taliyaha Xoogga Somalia, digniin ayaa la siiyay markuu qaadan waayay waa latogtay, kadib gaarigii ayaa yarxay," waxaa sidaasi yiri Ismaaciil Mukhtaar, oo Wasaaradda Warfaafinta DF, isagoo soo xiganaya Taliye Odaywaa.
Qaraxa ayaa ka dhacay Meel u dhaw Cisbitaalka Xoogga, waxaana bartilmaameedku ahaa Kolanyada Taliyaha Xoogga, Majiro Khasaarooyin dhimasho oo Askarta iyo shacabka soo gaarey marka laga reebo Is-qarxiyaha wadey Gaariga, oo Ciidamada Ilaalada Taliyaha kahor tageen in uu kolanyada soo dhexgalo.
Ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaadey Jen Odowaa xili uu kasoo baxay Dhismaha Wasaaradda Gaashaandhigga. Kooxda Al-Shabaab ayaa beegsata inta badan ragga hogaamiyaha Howlgallada Ciidanka ee lagu qaado degaanada ay maamusho.
Odowaa oo ah taliyihii ugu da'da yaraa oo xilka loo dhiibo [33 jir], ayaa ku yimid awoodda isku-shaandheyn Farmaajo sanadkii tagey ku sameeyay taliyeyaasha Ciidamada Xoogga kadib fashil amni oo dowladda soo wajahay xilligaasi.
0 Comments Topics: al-shabaab odowaa yuusuf qarax
Qarax khasaaro geystay oo ka dhacay Afgooye
Warar 23 September 2020 11:23
Saraakiisha amniga ayaa sheegay in miinada lagu aasay gudaha Suuqa Xoolaha ay qaraxday Saakay xili dadka ay ku mashquulsanayeen xoolo kala iibsashadda.